Cunsuriyiinta oo ku guuleystay doorashada Denmark | Somaliska
Doorashadii shalay ka dhacday wadanka dariska ah ee Denmark ayaa waxaa ku guul weyn ka gaaray xisbiga cunsuriga ah ee lagu magacaabo Danish People’s Party. Xisbigaan oo la mid ah xisbiga SD ee ka dhisan Sweden ayaa helay 21.1% cod iyagoo noqonaysa xisbiga labaad ee ugu weyn wadanka. Kaalinta sadexaad ayaa waxaa soo galay xisbiga midigta ee Venstre oo la filayo in ay soo magacaabaan raysal wasaare.
Raysal wasaarihii Denmark ee Helle Thorning-Schmidt oo ka tirsan xisbiga Social Democrats oo ah xisbiga ugu weyn wadanka ayaa qiratay in laga adkaaday xulufadeeda iyadoo sidoo kale iska casishay gudoomiyaha xisbiga.
Denmark ayaa u muuqata wadan cunsuriyada qaabilay, iyadoo ay dhamaan xisbiyada wadanka ka dhisan ay ololaha doorashada ku cambareeyeen soo galootiga iyo qaxootiga. Xitaa xisbiga Social Democrats ayaa waxay ololaha doorashada u isticmaaleen erayo ka soo horjeeda soo galootiga.
Raysal wasaaraha cusub ee Denmark ayaa waxaa noqonaya ninka lagu magacaabo Lars Løkke Rasmussen oo hogaamiya xisbiga Venstre. Waxaa uu dowlada la wadaagi doonaa xisbiga cunsuriga ah ee Danish People’s Party oo awooda ugu badan ku yeelan doona baarlamaanka.
Natiijada doorashada iyo dowlada cusub ee Denmark ayaa la filayaa in ay albaabada u xirto qaxootiga iska dhiibaya wadankaasi isla markaana ay nolosha ku adkayso soo galootiga ku nool Denmark.
Dad badan oo ku nool Sweden ayaa ka cabsi qaba in wadankaan uu sidoo kale raaco wadada Denmark, oo ay dhamaan xisbiyada wadankaasi isku raaceen in ay ka soo horjeestaan soo galootiga. Xisbiga cunsuriga ah ee SD ee ka dhisan Sweden ayaa bilihii la soo dhaafay ay taageeradiisa aad kor ugu kacday.
Waxaan rajeynayaa halkaba ama wadankaan aan joogno ineey qabsadaan. Insha Allah SD. waayo dalkii qurun Ayaa lagu soodaayey.
Wadankii sweden qashin oodhan Ayaa iska soo galay.
Wax wada gacmaha hoorsanaya Iyo muslim.
Fikrad aan lala dhicin 0 14
Subxanalaah Nin ka wato magaca Alxamdulila miyaadan ehen qof muslim ah maxaad uleedahay wadanka muslim ayaa iska soo buuxiye subxanalah ale utoobad keen
asc subxaanallaah ninka dhahaya muslim ayaa wadanka kasoo buuxsamay marka koobaad hadaad tahay qof muslim ah sifiican usoo dhamaystir mahada alle ee ah alxamdulilaah, ee mahan alxamdulila. hadadan ahayna caradaada aad muslimiinta u qabto ladhimo.
horta anagu hadaanahay muslin Gaal, jacayl kama rabno allaah ayaan jecelnahay Rabi ayaan jacayl ka rabnaa waxayrabaan hasameeyaano intay na necebyihiin inleeg ayaan necebnahay taa niyada u sheega waxna nama yeeli karaan. sheeko. qof walbana intii loogu talo galay ayuu noolaanayaa intuu cuni lahahaa ayuu cunayaa.
Adeer haday cunsuriyiin qab sato sweden waa lays kaga tagayaa wax dhibaato ahna majiraan haday dhibaato abuuraan dunida ilahay way balaadhan tahay waa laga sii qaxayaa uun
Wadanka Tunisien waxaa laxirey 80 misaajid.
Si aysan ufaafin nacayb, waxa ay ugu yeeraan muslimku: Kaafir iyo yahuud.
Si looga hortago dhibaatada iyo argagixisada. dadka aaminsan inay umada u ah daacada islamtinimada ay unecbeysiiyaan.
islamiska staten 3 wadan ayay isku mar weerareen.
Waa in laga hortago wixii nacayb abuuraya, dhankastaba hakayimaadee nacaybku haday tahay diin iyo haday tahay Nacist ama rasism.
Nacaybku waa wax aad uxun oo umada kala fogeeya.